कृषि जब | Work and career resources from USAHello | USAHello
Learn about agriculture and different kinds of agriculture jobs. Read about the different career paths you can take in agriculture. पत्ता तपाईं के प्रशिक्षण आवश्यक र जहाँ आफ्नो काम खोजी सुरु गर्न.
Image courtesy of US Fish & वन्यजन्तु सेवा
कृषि जब खेत काम सबै प्रकारका समावेश. खेत कार्यकर्ता बाली बढ्न, जनावर उठाउनु, र खाना मा खेत उत्पादन बारी. शरणार्थी, आप्रवासी, र प्रवासिहरु सबै राष्ट्रको खाद्य उत्पादन गर्न मदत.
शायद तिमी एक खेती पृष्ठभूमि छ र खेत मा काम गर्न चाहनुहुन्छ. सायद तपाईं एउटा कृषि पेसा मा प्रशिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ. कृषि जब विभिन्न प्रकार र कसरी पढ्न सुरु गर्न.
सानो किसान - धेरै सानो फारमहरु जैविक वा विशेषज्ञ खाद्य पदार्थ उत्पादन. संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो आफ्नै खेत शुरू काम र लगानीको धेरै आवश्यक.
खेत कामदार - ठूलो फारमहरु मा खेत कार्यकर्ता संग जनावर वा बाली संग या त काम.
मासु प्याकर - काम जनावरहरू मार्ने र कारखाना-जस्तो वातावरणमा मासु पैकिंग. थप अन्य कृषि जब भन्दा स्वास्थ्य बीमा प्रस्ताव संभावना. धेरै मासु-पैकिंग बिरुवाहरु शरणार्थी रोजगार.
मौसमी कामदार - मौसमी कामदारहरूलाई अक्सर क्रप harvests र रोपण मौसम निम्न संयुक्त वरिपरि यात्रा गर्ने प्रवासिहरु छन्. तिनीहरूले बाली, बोट, तान्नु, पानी, पैक र यी बाली लोड. सबैभन्दा मौसमी कामदारहरूलाई कागजातनगरिएकोत्रुटि छन् र काम अवस्था कमजोर छन्.
भित्री-शहर परियोजनाहरू - धेरै स्वयंसेवक अवसर र शहर फारमहरु र समुदाय उद्यान केही भुक्तानी स्थितिहरू छन्.
फारम मशीनरी अपरेटर - फारमहरु मा ठूलो उपकरण को संचालक थप प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण आवश्यक, तर तिनीहरूले मांग गर्दै छन् र अक्सर राम्रो अन्य खेत कार्यकर्ता भन्दा भुक्तानी.
सरकार निरीक्षक - कृषि निरीक्षकों निश्चित खाद्यान्नलाई बनाउन र जनावर राम्ररी उठाएको र स्वास्थ्य पालना गर्दै, सुरक्षा र पर्यावरण नियमहरु.
खेत प्रबन्धक वा कृषि पर्यवेक्षक - प्रबन्धकहरूले खेत श्रमिक निरीक्षण, खेत गर्न खेत बाट यात्रा गर्ने विशेष गरी प्रवासी श्रमिकहरुलाई.
Agribusiness - कृषि व्यवसाय पक्ष मा करियर, बिक्री र अन्य समर्थन उद्योग सहित, बढ्दै छन्. यी कार्यहरू थप व्यवस्थापन स्थितिहरू प्रस्ताव.
वैज्ञानिकहरूले - कृषि विज्ञान माटो विज्ञान र बोट जेनेटिक्स समावेश.
मेरो लागि सही कृषि जब छन्?
कृषि कडा शारीरिक कार्य हो. खेत कार्यकर्ता र मान्छे संग जनावर काम बलियो हुनु आवश्यक छ. धेरै कृषि जब पनि मशीनरी प्रयोग, त्यसैले यसलाई मिसिन संग राम्रो काम गर्ने कसैलाई राम्रो काम छ. तपाईं बाहिर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृषि जब तपाईं अनुरूप हुनेछ. तर खेत काम खतरनाक छ, र तपाईं मिसिन वरिपरि चेतावनी हुनु आवश्यक छ, रसायन र जनावर. तपाईं जिम्मेवारी लिनु गर्न सक्षम छन् भने, त्यसपछि हुनुको खेत प्रबन्धक वा पर्यवेक्षक लागि एक राम्रो फिट हुन सक्छ. दुई भाषामा बोल्ने खेत कार्यकर्ता प्रबन्धक लागि ठूलो सम्पत्ति हो.
कृषि जब क्यालिफोर्निया मा अर्थव्यवस्था को एक ठूलो भाग हो, टेक्सास, र केही मिड-पश्चिमी र दक्षिणी अमेरिका. डेयरी, फल, तरकारी र मासु उद्योग सधैं खेत कार्यकर्ता आवश्यक. तिनीहरूले सामान्यतया अनुभव वा उच्च विद्यालय शिक्षाको नसोध्नुहोस्. किसान वा खेत प्रबन्धक तपाईं तालिम हुनेछ. तर यी जब राम्रो भुक्तानी छैन. कृषि अमेरिकी विभाग अनुसार, सबै खेत कार्यकर्ता को आधा भन्दा बढी कागजातनगरिएकोत्रुटि छन्.
अन्य कृषि पेसा शिक्षा र केही प्रशिक्षण आवश्यक हुन सक्छ. सरकार जब, कृषि निरीक्षक जस्ता, नागरिकता आवश्यक. If you want to prepare for citizenship, you can take our निःशुल्क अनलाइन नागरिकता वर्ग.
तपाईं नजिकै कृषि कक्षाहरू फेला
फारमहरु धेरै संग क्षेत्रमा सामुदायिक कलेजहरु कृषिमा कक्षाहरू प्रस्ताव. तिनीहरूले दुई वर्ष एसोसिएट गरेको डिग्री प्रदान. तपाईं पशु विज्ञान मा एक एसोसिएट गरेको डिग्री प्राप्त गर्न सक्छन्, कृषि विज्ञान वा जीव. agribusiness काम गर्न, या तपाईं एक खेत उद्यम सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि व्यापार कौशल हुन सक्छ. त्यहाँ सामुदायिक कलेजहरु मा धेरै व्यापार पाठ्यक्रम हो. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज फेला.
You can take some online courses from the Cornell University Small Farms Program वा watch safety videos from U.S. कृषि सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र.
नयाँ अमेरिकी लागि खेती कार्यक्रम
धेरै शरणार्थी र आप्रवासी खेती को ज्ञान संग अमेरिका आउन. Across the USA, तपाईं प्रोग्राम छ कि समर्थन पाउन सक्नुहुन्छ, तालिम वा शरणार्थी किसान रोजगार. यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्:
Georgia: विश्व उत्पादक
हवाई: Kunia कृषि Incubator
इढहो: विश्व गार्डन
इलिनोइस: विश्व बगैचा शरणार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम
मेन: नयाँ अमेरिकी सतत कृषि परियोजना (NASAP)
न्यूयोर्क: सिरैक्यूज शरणार्थी कृषि साझेदारी
मैसाचुसेट्स: नयाँ प्रवेश दिगो खेतीपाती परियोजना
मिसौरी: अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान ग्लोबल फार्महरु
टेनेसी: सँगै बढ्दै
टेक्सास: यसलाई फर्वार्ड प्लान्ट
वरमोंट मा शरणार्थी खेती कार्यक्रम बारे एक भिडियो हेर्न
Useajob center: सरकार रोजगार केन्द्र मुक्त छन्. तिनीहरूले सल्लाह प्रस्ताव र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले रिजुमेहरू र काम आवेदन मद्दत. तिनीहरूले काम प्रशिक्षण र शिक्षा तपाईं जडान गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो निकटतम रोजगार केन्द्र फेला.
अनलाइन खोज: Aghires isawebsite for that lists agriculture jobs.
स्पटलाइट:भेट्नुहोस् मरिस slimy, विश्व को मालिक नयाँ जर्सी फारम बाली
मा 2002, मरिस Gbolo लाइबेरिया देखि शरणार्थी रूपमा दक्षिणी नयाँ जर्सी सारियो. आज, उहाँले फिर्ता उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ के गरिरहेको छ - आफ्नो पैतृक भूमि आफ्नो मनपर्ने तरकारी बाली खेती.
खेत उद्यमीहरू सँगै व्यवसाय निर्माण